Boky 10.000 no mameno ny araben'i Toronto noho ny fiaraha-miasa kanto | Famoronana an-tserasera
Renirano misy boky 10.000 XNUMX mameno ny araben'i Toronto
Ny literatiora manohitra ny fanondranana olona an-tsokosoko dia tetikasan'i Luzinterruptus, a vondrona tsy fantatra anarana izay midina an-dalambe miaraka amin'ny filokana an-tanàn-dehibe amin'ny habakabaka. Hafatra iray fanoherana fa ny arabe dia toerana malalaka ho an'ny olona kokoa noho ny ho an'ny fiara sy ny karazana fiara fitaterana izay matetika miorina amin'ny lasantsy fosily.
Tao anatin'ny fametrahana azy ireo farany, ny zava-kanto dia nanova ny iray amin'ireo arabe be olona indrindra ao Toronto renirano misy boky 10.000, araka ny hitanao amin'ny sary zarainay avy amin'ny Creativos Online. Araka ny hitanao dia mahavariana fotsiny ny valiny ary endrika iray manokana hanehoana ireo arabe afovoan'ny tanàna lehibe toa an'i Toronto.
Ity tolo-kevitra ara-javakanto ity dia ao amin'ny Nuit Blanche 2016, fetibe zavakanto izay tanterahina mandritra ny iray alina. Ireo boky dia natolotr'i Salvation Army ary mpiasa an-tsitrapo 50 no niasa nandritra ny 12 andro hamenoana ny Hagerman Street tamin'ny ony mikoriana mamaky ireo boky manazava.
Araka ny filazan'izy ireo avy amin'ny tranonkalany dia manondro faritra iray amin'ny tanàna ny vondrona, izany hoe natokana ho an'ny tabataba, hafainganana ary ny fahalotoana dia nanjary, iray alina, toerana iray hampanginana, fiaraha-miaina milamina sy mazava izay avy amin'ny pejin'ireo boky an'arivony rehetra ireo. Ho eo ireo boky ho an'izay te-hamaky azy ireo ka ny volavolan-kevitra ara-javakanto dia hanodina ny tenany mandra-pitian'ny mpandalo azy.
Tamin'ny farany, ireo hevitra ireo dia teny an-dalambe nandritra ny adiny folo, saingy azo antoka fa ny mponina ao Toronto hahatsiaro azy elaela kokoa izy ireo amin'ny alàlan'ny fanazavana ny lalàny amin'ny fomba iray hafa tena miavaka sy mahatalanjona.
Manana ny tranonkala avy amin'i luzinterruptus y ny facebook-nao for araho izy ireo amin'ny zava-niainany vaovao ary tolo-kevitra momba ny kanto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Renirano misy boky 10.000 XNUMX mameno ny araben'i Toronto
Manerana an'i Toronto? ;)… Izay farany!
Saika haha ​​:) Salama!
Mariano Peccinetti sy surrealism dia nanao collage